Kickstarting Yako Vhidhiyo Kushambadzira Campaign mu3 Nzira | Martech Zone
Chitatu, October 9, 2019 Chitatu, October 9, 2019 Andre Oentoro
Iwe unogona kunge wakanzwa kuburikidza nemuzambiringa kuti mavhidhiyo akakosha masimendi kune chero bhizinesi rinotarisa kuvandudza yavo yepamhepo kuvapo. Izvi clip zvakanaka pakuwedzera shanduko nekuti ivo vakanaka pakuita vateereri uye kuendesa akaomarara mameseji nenzira inoshanda - chii chisingade?
Saka, iwe uri kushamisika kuti ungatangisa sei yako vhidhiyo kushambadzira mushandirapamwe? Mushandirapamwe wekushambadzira wevhidhiyo unogona kuita kunge chirongwa hombe uye hauzive danho rekutanga kutora. Usanetseke, isu tinokupa iwe matipi mashoma ekukubatsira iwe kunze.
1. Ziva Vateereri Vako
Usati watanga kukwikwidza zvigadzirwa zvekugadzira vhidhiyo yako, unofanirwa kuona kuti vateereri vako ndiani wekutanga. Kana iwe usingazive waunoda kuti vhidhiyo iyi isvike, zvingave zvakaoma kugadzira izvo zvirimo uye zvakatonyanya, zvinogona kupedzisira zvaunganidzwa guruva sezvo pasina munhu anoda kuzvitarisa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti vateereri vako ndivanaani nekuti ivo ndivo vanozoona vhidhiyo yako. Saka, zivana navo- zvavanoda, zvavasingade, zvavari kunetseka nazvo, uye nemabatiro aungaita mhinduro kumatambudziko avo.
Zvichida vanga vachirwisana nemashandisirwo echigadzirwa chako kana sevhisi, saka kugadzira vhidhiyo inovatsanangurira nezve zvigadzirwa zvako kana rako mhando ichave nzira yakanaka yekutanga.
2. Ita Zvimwe Zvinyorwa Zvekutsvagisa
Mazwi akakosha haasi ekungoitirwa paGoogle. Izvo zvinogona kungove zvinobatsira pakuona yako vhidhiyo matura anotarisa sezvaari iwo ekumisikidza yakakwira pane ekutsvaga injini. Paunonyora mubha yekutsvaga paYouTube, iwe unowana inodonha-pasi bhokisi rizere nemazano.
Aya mazano anobatsira pavhidhiyo yako nekuti inokuratidza izvo tsvakiridzo dzakakurumbira. Paunenge iwe uine pfungwa yezvakakosha mazwi ari kutsvaga vanhu, unogona kuvaka zvemukati zvakapoterera iwo mazwi uye gadzira chimwe chinhu vanhu chavanoda kuona.
Iwe unogona kukwidziridza SEO pavhidhiyo yako nekushandisa zvinonakidza zvigunwe, mazita, uye tsananguro dzinokwezva kune izvo vateereri vako vanotsvaga. Ingoshandisa mazwi akakosha zvakanyanya sezvaunogona mubhokisi rerondedzero kana zita.
3. Wana Rubatsiro Kubva Kune Zvimwe Zvishandiso
Iyo Internet izere neakawanda zviwanikwa. Kune dambudziko rega rega, pane mukana wakawanda waungawana mhinduro paGoogle.
Kana iwe uri kutsvaga kugadzira vhidhiyo asi usingazive sei, usarega izvo zvichikumisa iwe kutanga. Mavhidhiyo angaratidzika senge hombe kudyara uye anogona kutaridzika sechimwe chinhu chekupururudza, asi tenda kana kwete, unogona kuwana zvishandiso zvekugadzira mavhidhiyo izvo zvinodhura kana kunyangwe mahara.
Iwe haufanire kunge uri vhidhiyo yekushambadzira nyanzvi kuti ugadzire vhidhiyo wega. Kunyangwe iwe uchingotanga, iwe unogona kuwana akasiyana maturu online.
Iye zvino zvaunenge uine zano rakaipa rekuti chii chaunogadzirira kuti upedzisire watanga yako vhidhiyo kushambadzira mushandirapamwe nhasi. Saka, tanga kunyora iwo mazwi akakosha uye uone kuti vateereri vako ndivanaani. Kana ukangowana izvo zviviri zvakarongedzwa, inguva yekutanga kugadzira mavhidhiyo ako.
Tags: Kushambadzira Vhidhiyovhidhiyo zano
Andre Oentoro ndiye muvambi we Breadnbeyond, mubairo unokunda unotsanangudza vhidhiyo kambani. Iye anobatsira bhizinesi kuwedzera shanduko yemitengo, vhara zvimwe zvekutengesa uye uwane yakanaka ROI kubva kune anotsanangura mavhidhiyo (mune iwo marongero).